आज स्व. बलिउड अभिनेता सुशान्तको जन्मदिन, यस्तो छ उनको जीवन कहानी - www.dthreeonline.com
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ ०८, २०७७ समय: १०:०९:०६
ईटहरी/ करोडौंका ढुकढुकी स्व. बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको आज जन्मदिन । उनी पटनामा जन्मेका थिए । उनका बुबा सरकारी अधिकारी र आमा गृहिणी थिइन् भने सुशान्तको बाल्यकाल दिल्लीमा बित्यो । सुशान्त सिंह राजपूतका चार दिदीबहिनी छन् । राजपूतको एक बहिनी राज्य स्तरको क्रिकेटर हो भने एउटी बहिनी अमेरिकामा बसोवास गर्छिन् । सुशान्त आफ्नी जेठी बहिनीमा आमाको छवि देख्थे । उनले १६-१७ बर्षको उमेरमै आफ्नो आमा गुमाए । यस पछि उनको साहारा उनको बुवा बने । त्यसैले सुशान्त आफ्नो बुबासँग धेरै नजिक थिए ।
उनी पढ्नमा पनि माहिर थिए । १२ औं परीक्षामा उनी एआईईईमा सातौं स्थानमा थिए, त्यसपछि उनले दिल्ली इञ्जिनियरिंगमा प्रवेश लिए । इन्जिनियरिङ पढ्दै गर्दा सुशांत सिंह राजपूतले फिल्मतिर ध्यान लगाए र अभिनेता बन्ने सपना बोकि मुम्बई आए । राजपूतले २२ वर्षको उमेरमा ‘करीस देस में है मेरा दिल’ नामक धारावाहिकबाट अभिनय करियरको शुरुवात गरे । यस सीरियलमा उनी हर्षद चोपडाको कान्छो भाईको भूमिकामा देखिएका थिए ।
यस्तै एकता कपूरले उनलाई एक धाराबाहिक ‘पवित्रा रिस्ता’को प्रस्ताव गरे । किनभने उनको लागी ‘मानव’ भूमिकामा उनको मुस्कान प्रशंसकको हृदय जित्छ र यो भयो । यसै धाराबाहिक पछि उनी करोडौंको ढुकढुकी बन्न सफल भए । यसपश्चात राजपूतले टिभीमा दुई रियलिटी शो गरे – झलक दिखला जा र जारा नाच के दिखे । उनको नृत्य प्रतिभाले पनि सबैको मन छोयो । त्यसैले पनि उनलाई एक चम्किलो तारा भनिन्थ्यो । यस्तै उनको फिल्ममा भने अभिषेक कपूरको फिल्म ‘काई पो छे’बाट डेब्यु भयो ।
अभिषेक कपूर एकता कपूरका भाई हुन् । काई पो छे फिल्म चेतन भगतको उपन्यास थ्री मिस्टेक्स अफ माई लाइफको रीमेक थियो र यस फिल्ममा सुशांत सिंह राजपूतले ईशान नामको केटाको भूमिकामा देखिएका थिए । जुन उनका फ्यानहरूले धेरै मन पराएका थिए । राजपूतले आफ्नो डेब्यु अवार्डका लागि जताततै नोमिनेसन प्राप्त गरे तर सफल भएका थिएनन् । यता काई पो छेको लागि भने सर्वश्रेष्ठ डेब्यू पुरस्कार प्राप्त गरे । सुशान्तले राजकुमार हिरानीको फिल्म पीकेबाट पहिलो ठूलो ब्रेक पाए, जहाँ उनको १० मिनेटको भूमिकाले उनलाई निकै सफल साबित गरायो । उनी चलचित्रमा आउनु अघि श्यामक डावरको संस्थानमा नृत्य सिक्ने गर्थे ।
उनले शाहरुख खानलगायत धेरै स्टारहरूको पछाडि कोरसमा नृत्य गरेका थिए । राजपूत शाहरुख खानको ठूलो फ्यान समेत थिए । उनी आफुले अभिनय गर्ने भुमिकाको लागि कडा मेहनत गर्ने गर्थे । सुशान्तले डेढ बर्षसम्म ‘एमएस धोनी’को भूमिकाको लागी प्रशिक्षण लिएका थिए । उनको टीम इंडिया टीशर्ट लिने ठुलो सपना थियो त्यसैले पनि यसका लागि उनले धोनीको प्रशिक्षणको क्रममा कडा मेहनत गरेका थिए । जसको परिणाम स्वरुप किरण मोरे आफैले उनलाई टीम इंडिया टीशर्ट दिएका थिए । उनी अध्ययनमा यति तेज थिए कि उनले नेशनल फिजिक्स ओलम्पियाडमा पहिलो स्थान पाए ।
उनी नासामा प्रशिक्षण लिन चाहन्थे । यस्तै उनले चन्द्रमामा एउटा टुक्रा जग्गा समेत किने । उनि शाहरुख खान पछि चन्द्रमामा जग्गा किन्ने दोश्रो स्टार थिए । यसैले पनि सुशांत र शाहरुखको जीवन र क्यारियरमा धेरै समानताहरू छन् । सुशांत सिंह राजपूतले राज २ मा मोहित सुरीलाई सहयोग गरे । फिल्ममा कंगना रनौत र इमरान हाश्मी मुख्य भूमिकामा थिए । उनले आफ्नो टिभी धारावाहिक पबित्रा रिश्ता छोडेपछि निर्देशनको प्रशिक्षण लिन चाहन्थे । तर त्यसपछि उनलाई फिल्मबाट प्रस्तावहरू आए । सुशांत सिंह राजपूतले चन्दा मामा दुर नामको फिल्ममा काम गर्ने थिए । उनले यस फिल्मको लागि नासामा अनुसन्धान पनि सुरु गरे । तर त्यसपछि उनले यो फिल्म अस्वीकार गरे किनकि उनी नासामा वास्तवमै प्रशिक्षण लिन चाहन्थे ।
सुशांत सिंह राजपूत नासामा यति चासो राख्थे कि उनले नासामा अध्ययन गर्न चाहने १०० बच्चाहरूको सूची बनाउनको लागि आफ्नो टोलीलाई भने । जसको लागि उनले सम्पुर्ण पढाइ खर्च बेहोर्न लागेका थिए । सुशान्तको नि ध न पछि विश्वास गरिन्छ कि राजपूत फिल्म ‘ड्राइभ’ असफल भएपछि करण जोहरसँग एकदम रिसाएका थिए । यसै समयमा, उनलाई यशराज फिल्महरू द्वारा प्रतिबन्धित पनि गरिएको थियो । किनभने शेखर कपूरको फिल्म पानी डिब्बा भएपछि सुशांत सिंह राजपूतले आदित्य चोपडासँग धेरै बहस गरेका थिए । उनले पवित्रा रिस्ताको समयमा अंकिता लोखंडेसँग गहिरो प्रेममा परेका थिए । यो सम्बन्ध लामो समय सम्म चल्यो । तर, दुईको छ वर्ष पछि ब्रेकअप भयो ।
पहिलो प्रेम असफल पछि सुशांत सिंह राजपूतको नाम कृति सैनन, सारा अली खान र त्यसपछि रिया चक्रवर्ती संगपनि प्रेमका लागि जोडियो । रिया चक्रवर्तीले सुशान्तको नि ध न पछि खुलाए कि उनी उनकी प्रेमिका थिइन् र उनीसँग लिभ इन टुगेदरमा थिए । यस्तै सुशान्त र सारा अली खानको सम्बन्ध पर्दा पछाडि थियो र यो उनको साथी र फार्महाउस म्यानेजरले उनको मृत्यु पछि खोले । सारा र सुशान्त एकदम नजिक थिए र सुशान्तले सारा अली खान लाई प्रपोज गर्न लागेका थिए । तर केदारनाथ पछि साराले आफूलाई सुशान्तबाट टाढा राखीन् । यी अनेक उतारचढाव संगै उनी १४ जुन २०२० मा आफ्नै फ्ल्याटमा मृ त अवस्थामा फेला परेका थिए । उनको मृ त्यु पछि मिडियाबाट बलिउडका धेरै कुराहरु बाहिरियो । फ्यानहरूले उनको न्यायको लागि हरपल आग्रह गरिरहेका छन । तर, हलसम्म मृ त्युको कारण पत्तो लाग्न सकेको छैन । आज पनि उनको मृ त्युको बारेमा सीबीआई अनुसन्धान जारी छ ।